I-5 yeempawu zokuNika abaThengi abathembekileyo ukuThengisa nokuThengisa | Martech Zone
UBrett Evans yitalente enkulu yokuthengisa ekuhlaleni kwaye wandicebisa ukuba ndifunde Ukuthengisa umceli mngeni: Ukuthatha uLawulo kwiNcoko yaBathengi kwenye yeengxoxo zethu ezininzi zokungabikho kwentengiso kunye nentengiso.
Ngokusekwe kuphononongo olupheleleyo lwamawaka eentengiso ezithengiswayo kumashishini amaninzi nakwiijografi,Intengiso yeChallenger Uxoxa ngelithi ulwalamano lwakudala luyindlela elahlekileyo, ngakumbi xa kusiziwa ekuthengiseni izisombululo ezimbaxa, ezimbaxa kwezamashishini nezorhwebo. Uphononongo lwababhali lufumanise ukuba yonke intengiso rep emhlabeni iwela kwenye yeeprofayili ezintlanu ezahlukileyo, kwaye ngelixa zonke ezi ntlobo zabaphengululi zinokuhambisa intengiso yokusebenza, inye kuphela -Ingxaki-ehambisa intsebenzo ephezulu ngokungaguqukiyo.
Andinguye fan omkhulu weencwadi zokuthengisa. Ndihlala ndizifumana zigqithisile kwaye zityhala iinkqubo ezinokukhuthaza abanye abantu abathengisayo, kodwa ayingabo bonke. Ndiyazi abantu abathengisayo abamangalisayo abakhulisa ubudlelwane kwiminyaka edlulileyo kwaye bavale izivumelwano ezinkulu, ndiyazi abantu abathengisayo abathembekileyo ngaphandle kwenkampani abasebenza kuyo-ukuzisa abathengi kunye nabo kwilizwe liphela, kwaye ndiyazi nabantu abathengisayo abaphuma ngaphandle abathanda ukoyisa ifowuni yonke imini kwaye ngandlela ithile ibandakanyeka kulindelo ngaphakathi kwemizuzu embalwa ukubaqhubela kwinqanaba elilandelayo.
Le ncwadi yahluke kakhulu-ukwahlula ubuntu obahlukeneyo bokuthengisa kunye nokubonelela ngophando olusisiseko. Ayisixubushi nje kuphela ngenkuthazo kunye neqhinga labathengisi, inikezela ngengqondo ebanzi malunga nokuba abathengi bafuna ntoni kwinkqubo yentengiso. Ezi zilandelayo ziimpawu ezi-5 eziphezulu, ngokubaluleka, ukuba abathengi bafuna ubudlelwane babo nommeli wentengiso:
Unikelo lwempendulo iimbono ezizodwa nezixabisekileyo kwimarike
Impendulo iyandinceda zula ezinye iindlela
I-Rep ibonelela iingcebiso eziqhubekayo okanye ukubonisana
Impendulo iyandinceda thintela izigcayiseli ezinokubakho
Phendula undifundisa ngemiba emitsha neziphumo
Ukhe waqaphela ukuzimisela, izakhono zothethathethwano, ukuthengisa ngaphezulu, isantya sokuvala, okanye naluphi na uphawu kwezi zi-5 eziphezulu? Hayi. Ngapha koko, ezi mpawu zimbini zilandelayo zazikhona kulula ukuthenga kuyo nokuba Inkxaso ebanzi kumbutho wonke.
Jonga nakuphi na ukufana phakathi koluphi uhlobo lwamava okuthengisa olifunayo kwaye loluphi uhlobo lwesicwangciso sentengiso osenzayo malunga nethemba lakho kunye nabathengi? Ndiyathemba ukuba uyayibona into endiyibonayo! Masitshintshe imigaqo:
Umxholo wakho unikezela iimbono ezizodwa nezixabisekileyo kwimarike
Umxholo wakho uyandinceda zula ezinye iindlela
Umxholo wakho ubonelela iingcebiso eziqhubekayo okanye ukubonisana
Umxholo wakho uyandinceda thintela izigcayiseli ezinokubakho
Umxholo wakho undifundisa ngemiba emitsha neziphumo
Mic yehla! Zonke ezi mpawu zikhomba kwinto enye - ukwakha zombini ukuthembela, igunya, kunye nexabiso ixesha elingaphezulu kunye nethemba kunye nabathengi. Abathengisi ababalaseleyo bayazi ukuba le yindlela abazivala ngayo izivumelwano… kwaye owona mxholo kunye namaqela entengiso entlalontle ayazi ukuba yindlela yokuvala izivumelwano, okanye ukuqhuba amathemba ngokuguqula ifanele, okanye ukunceda amaqela abo athengisayo ukuba afumane ithuba ngaphezulu kokhuphiswano.
tags: brent adamsonIncoko yabathengiukunyaniseka kwabathengiukunyanisekamattthews dixoniimpawu zentengisoukuthengisa umceli mngeni